DAILY NATION: Al-Shabaab waa halis amni oo heysata Kenya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
DAILY NATION: Al-Shabaab waa halis amni oo heysata Kenya.
On Jun 25, 2019 3,022 0
Ciidamo katirsan Al-Shabaab oo ku sugan Laamu.
Wargeyska afka dheer ee Daily Nation, kana soo baxa wadanka Kenya ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo weerarada sii xoogeystay ee ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulinayaan dhulka NFD ee kujira gumeysiga Kenya.
“Al-Shabaab waxay todobaadyadii tagay kordhiyeen weerarada ay ka gyesanayaan deegaannada dhaca xuduuda ee katirsan gobollada Mandheera, Gaarisa iyo Wajeer, halkaas oo ay ku dileen ciidamo katirsan Police-ka Kenya” ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Daily Nation.
Inkastoo wargeysku ka gaabsaday inuu si cad uga hadlo khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada Kenyaatiga, hadana wuxuu sheegay inta badan deegaannada ay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen weerarada.
Waxaa uu deegaannada uu sheegay kamid ah, Sheeikh Barrow, Arabia, Fino, Lafey, Alunga, Warankara, Falama, Katulo, Mansa, Diif, Konton iyo deegaanno kale ee dhowr oo aad u badan, kuwaas oo dhamaantooda katirsan dhulka NFD, ee ay Kenya xooga ku heysato.
“Deegaanka Yumbiz ayaa ah goobtii ugu dambeysay ee ay ka dheceen dagaallada dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Police-ka Kenya oo taageero ka helaya kuwa sida gaarka ah u tababaran” ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Daily Nation.
Saraakiisha Amaanka iyo kuwa Police-ka dhulka NFD ayaa sheegaya iney filayaan weeraro horleh oo uga yimaada dhinaca ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, maadaama bay yiraahdeen ay deegaannadaas soo buux dhaafiyeen ciidamada Al-Shabaab.
“Feejignaanta dhinaca amniga ah waa mid aad u sarreysa, maadaama la filayo in Al-Shabaab ay weeraro horleh ka fuliyaan deegaannadeena” ayuu yiri Afhayeen u hadlay Police-ka Kenya oo lagu magacaabo Charles Wahango.
Wajeer, Gaarisa iyo Mandheera oo keliya maahan meelaha ay ka dhacayaan weerarada qorsheysan ee ay fulinayaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana afhayeenka Police-ka Wajeer uu sheegayaa in deegaannada Laamu ay xitaa ka dhacayaan weeraro kuwan lamid ah.
“Dhibaatadu Wajeer oo keliya kama jirto, ee waxay ka taagantahay laga soo billaabo Mandheera illaa Laamu, waxaana isku dayayenaa inan qaadno tallaabooyin wanaagsan” ayuu yiri taliyaha Police-ka Kenya ee Wajeer ninka lagu magacaabo Stephen.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa ciidamo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dhulka NFD ee ay leeyihin umadda Soomaaliyeed, kuna jirta gacanta Kenya waxay ka fuliyeen silsilado weeraro ah, oo lagu beegsaday ciidanka Kenya.
Tobanaan askari oo Kenyaati ah ayaa la xaqiijiyay dhimashadooda, halka gawaari gaashaman oo ay wateenna la burburiyay, waxaana cabsi iyo wal wal ku hooyanaya qoysaska Kenyaatiga ee xooga lagu deegaamayay dhulkaas ay leeyihiin Muslimiinta.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa horay wacad ugu martay iney sii wadi doonto howlgallada ay ka fulineyso dhulka NFD iyo xeebaha Laamu, oo ay sheegtay iney yihiin dhul ay leeyihiin Muslimiinta, loona baahanyahay in la xureeyo.
Axmad 4079 posts 8 comments
Dhageyso Warka Subaxnimo.
Axmad	 Jan 19, 2022 0
Wararka ka imaanaya dalka Burkina Faso ayaa ku waramaya in Afar askari oo ka tirsan ciidamda Faransiiska ee…
Prev	Next 1 of 2,358